Google choro ka ngwa ahia gam akporo ya gha echedo nchebe | Akụkọ akụrụngwa
Google choro ka ulo ahia gam akporo gam akporo ya di nchebe
Storeslọ ahịa ngwa, n'agbanyeghị usoro okike eji, bụ ụzọ bụ isi maka ndị ọrụ iji wụnye ngwa na njedebe ha. Lọ ahịa ngwa niile nwere otu ndị na-ahụ maka ngwa ọ bụla chọrọ ịnọ na ụlọ ahịa dị iche iche n'oge niile. Ndị nlekọta bụ mmadụ, ya mere na ihe karịrị otu oge ha mehiere ma Agbaghara ngwa nke zoro ebumnuche abụọ, ma ọ bụ nbudata ọdịnaya echekwara site na nwebisiinka, ngwa ndị gụnyere malware ma ọ bụ nje, egwuregwu ndị bụ ezigbo ihe ọzọ nke ọzọ ...
N’ebe karịrị ugboro otu, anyị ahụgoro egwuregwu nke bụ n'ezie nnomi ma nke kachasị mma karịa egwuregwu mbụ. Nsogbu ndị a niile bụ naanị ihe Ha na-ebute nsogbu na ntụkwasị obi na ndị mmepe na ndị ọrụ, ihe nwere ike imerụ Google, ebe ọ bụ na onye nwe ụlọ ahịa anaghị echekwa ndị mmepe n'oge ọ bụla site na onye nwe ụlọ ahịa ebe ha na-enye ngwa ha, n'ụzọ megidere ihe na-eme na Storelọ Ahịa App, ebe a na-emeso ndị mmepe dị ka ọla edo na akwa, ebe ọ bụ na ha na-ewepụta nnukwu ego na Cupertino -malite ụlọ ọrụ.
Google ga-adị elu karịa ngwa niile dị ugbu a na Playlọ Ahịa Google na-elekọta onye ọ bụla n’ime ha ka ha chọpụta n’otu aka ma ọ bụrụ na ha bụ akwụkwọ nke mbụ, ma ọ bụrụ na ọ gụnyere nyocha ụgha, ọ bụrụ na ha gụnyere ụdị malware ọ bụla ma ọ bụ nje virus na ịbugharị ndị niile gbalịrị ịmegharị ọnọdụ na ụlọ ahịa ngwa Google. Google ga - ebido inye ndị na - emepe emepe ohere ịkpọte ha site n’ịyi egwu ịchụpụ ha na mmemme onye nrụpụta ma ọ bụrụ na ha gaa n’ihu na atụmatụ ọjọọ a na - emebi ihe Google
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Google choro ka ulo ahia gam akporo gam akporo ya di nchebe
Edere ọkwa ọhụụ iPhone kachasị na Spain
A Ras Pi, skateboard na Wii remote iji mepụta skateboard eletriki gi